Toetoetran'ny fiaretana haran-dranomasina | Fiaretana haran-dranomasina
Ny singa amin'ny faharetan'ny haran-dranomasina (ohatra, ny fanoherana, ny fanarenana, ny fanovana, ny fivoahana, ny fahatsapana, ny fahafaha-mampifanaraka) dia faritan'ny toetra ekolojika sy sosialy. Ny fahazoana ireo toetra ireo dia lakilen'ny fitantanana ny tontolo iainana ny haran-dranomasina.
Toetoetra maharesy lahatra ny tontolo iainana
Toetra vitsivitsy manan-danja ho an'ny tontolo iainana haran-dranomasina dia misy:
Fahasamihafana sy fihenan'ny asa - Ny habetsahan'ny biodiversité avo lenta dia mampitombo ny fahafahan'ny valinteny isan-karazany amin'ny fandrahonana. Ny fahasamihafana dia misy ny fahasamihafana eo amin'ny fototarazo, ny fahasamihafan'ny karazany ary ny fahasamihafana morfolojian'ny haran-dranomasina sy ireo karazana haran-dranomasina hafa, ary koa ny fahasamihafana ao amin'ireo fivorian'ny zooxanthellae. Ny fihoaram-pefy miasa dia manondro ireo karazan-karazany samy manana ny asany na ny asany ao anatin'ny tontolo iainana ny haran-dranomasina, izay manome harato fiarovana raha toa ka misy karazana iray very ao amin'ilay rafitra. Ny vondrona mandeha amin'ny haran-dranomasina dia misy ny mpanao trano, ny mpamokatra voalohany, ny bioerodera, ny mpihaza, ny mpizaha, ary ny mpiremby. ref
Recruitment - Ny fandraisana mpiasa dia ny fizotran'ny tanora (ohatra: olitra sy trondro ary ahidrano) mivelatra amin'ny lozam-pifamoivoizana ary lasa anisan'ny olondehibe. Ny fandraisana mpiasa voajanahary dia famantarana iray lehibe amin'ny faharetan'ny haran-dranomasina. Ao amin'ny haran-dranomasina mahasalama, ny fandraisana mpiasa dia miantoka ny habetsaky ny harena voajanahary sy ny fihenan'ny asa; eny amin'ny haran-dranomasina simba, ny fandraisana mpiasa dia miantoka ny fahasitranana. Ny fepetra fandraisana mpiasa tsara dia manamora ny toe-piainana ara-batana toy ny onjan-dranomasina sy ny renirano eo anelanelan'ny haran-dranomasina ary ny onjan-micro ao anaty vatohara; loharanom-pahalalana izay mety ho avy ao anaty vatohara iray ihany (recruiting tena) na avy amin'ny haran-dranomasina (haran-dranomasina hafa); ary toeram-ponenana mety, na amin'ny lafiny fahafaha-manana toerana na karazana substrates.
Herbivory - Koa satria ny mponina herbivore mahasalama dia mitazona ny makroalga tsy hihoatra ny haran-dranomasina na manakana ny fanangonana haran-dranomasina, dia manan-danja tokoa amin'ny fiaretan'ny haran-dranomasina. Ny trondro ahitra dia mizara efatra fikambanana, mifototra amin'ny andraikitr'izy ireo amin'ny fifehezana ny fitomboan'ny algala sy ny fitazonana ny vatan'ny haran-dranomasina amin'ny fampidirana haran-dranomasina. Anisan'izany ireo scrapers / excavator kely, excavator / bioerodera lehibe, grazer / detritivores ary browser. Ny vondrona miasa tsirairay dia manome anjara biriky lehibe sy mifameno amin'ny fiaretan'ny haran-dranomasina.
Sekolin'ny trondro mpandidy, Acanthurus coeruleus, ahitra ao amin'ny Flower Garden Banks National Marine Sanctuary. Credit: GP Schmahl/NOAA (ankavia); Ny boloky bemphead, Bolbometopon muricatum, fitrandrahana. Credit: Matt Curnock/Ocean Image Bank (ankavanana)
Toetra mampahatanjaka ny fiaraha-monina
Ny fahafantarana ireo toetra ara-tsosialin'ny vondrom-piarahamonina iray izay manamafy (na mampihena) ny faharetan'ny rafitra sosialy-ekolojika no foto-pikarohana mitohy ary mitaky ny famotopotorana ny faharetan'ny vondrom-piarahamonina sy ny rafi-pitantanan'izy ireo. Toetoetra manan-danja vitsivitsy no ahitana (namboarina avy misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCinner sy Barnes 2019manokatra fisie PDF , misokatra amin'ny varavarankely vaovaoRindrambaiko momba ny haran-dranomasinamanokatra fisie PDF ):
Resources izay ara-teknika, ara-bola na mifototra amin'ny serivisy ary ahafahan'ny olona eo an-toerana mizatra amin'ny fahaverezan'ny fivelomana miankina amin'ny haran-dranomasina.
manovaova, izay tsy fiasan'ny fahasamihafan'ny safidy misy ihany, fa koa ny fananana toe-tsaina sy fahavononan-tena hifanaraka sy hiova manoloana ireo fanamby sy fisalasalana.
Fitantanam-pitondrana, ao anatin'izany ny andrim-panjakana sy ny tamba-jotra sosialy, dia misy fiantraikany amin'ny fahaizana mandrindra sy manao zavatra mifanaraka amin'izany fandrahonana izany. Ny governance koa dia mandrakotra ny fandaminana ny vondrom-piarahamonina sy ny firafitry ny fizotran'ny fanapaha-kevitra ary misy fiantraikany bebe kokoa amin'ny lalàna sy fitsipika, fitarihana, fitantanana, fandraisana andraikitra ary fitoviana.
fahalalana manome ny fahaizana hanaiky sy hamaly ny fanovana. Ny fahalalana dia asan'ny fanabeazana sy fidirana amin'ny fampahalalana sy fahatsiarovana avy amin'ny zavatra niainana taloha. Ny fampandraisana andraikitra ny olona manana fifandraisana misy eo amin'ny razambe amin'ny toerana iray (izany hoe, tompona nentin-drazana sy ny Vazimba) ary mampiditra ny fahalalany amin'ny fanapahan-kevitra dia ampahany lehibe amin'ny dingana rehetra mifandraika amin'ny fanamafisana ny faharetana.
Fahasalamana sy kolontsaina, toy ny zavatra niainanao manokana, ny fomba fanao mahazatra ary ny fihetsika manoloana ny loza mety hitranga, dia mety hiteraka fameperana ny fahavononany hanao zavatra, ary hisy fiantraikany amin'ny safidy sy ny fanarahan-dalàna.
Ny fambolena kôkômbra dia fomba fivelomana hafa amin'ny fomba fanjonoana hafa fitrandrahana. Sary © Garth Cripps / Blue Ventures
Course Online Resilience Coral Reef, lesona 3: Reef Resilience
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoHarena an-tsokosoko
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMomba ny hamafin'ny haran-dranomasina sy ny asa fivelomana maharitra: Boky torolàlana iray ho an'ireo mpitantana haran-dranomasina Karaiba - Toko: Fanjakan'ny haran-dranomasina sy fiaretana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoARC Ivon-kafatra ho an'ny Fikarohana momba ny Harena an-habakabaka
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMialoha ny hisian'ny tsy fahampiana ara-tontolo iainana: Fitantanana ny faharetan'ny harambato